August 2021 – Cele News TV
သူ့ရဲ့လက်ရှိကျန်းမာရေးအခြေအနေကို Live လွှင့်ပြီးပြောပြ လာတဲ့ ဝါရင့် လူရွှင်တော် ကြီး ဦးမိုးဒီ
ရယ္စရာဟာသျပတ္လုံးေတြနဲ ႔ ဟာသဉာဏ္ ရႊင္မႈေတြအျပင္ ဟန္ပန္အမူအရာေတြေၾကာင့္ ယေန႔အခ်ိန္ထိပရိသတ္ေတြ အျမဲအမွတ္ရေနတဲ့ ဝါရင့္ဟာသလူရႊင္ေတာ္ ဦးမိုးဒီကေတာ့ လက္ရွိမွာ အသက္အရြ ယ္ေၾ ကာ င့္ အ ႏုပညာအလုပ္ေတြ ရပ္နားထာ းရတာ ျဖစ္ပါတယ္..။လတ္တေလာမွာ ကိုဗစ္ေရာဂါေတြ ကူးစက္ျပန႔္ပြားမႈေၾကာင့္ သက္ႀကီးရြယ္အို အႏုပညာရွင္ေတြအတြက္ ပရိသတ္ေ တြက […]
အသက် (၃၀) မှာ အမိုက် စား စော်ကြီး ဖြစ် ရမယ်ဆိုတဲ့ နေခြည်ဦး(အေးပါအေးပါ)
အချိန်တိုအတွင်း ပရိသတ် အသိမှတ်ပြု အားပေးမှု ရရှိလာသူ နေခြည်ဦး ကတော့ မိဘထောက်ပံ့မှု အားကေ ာင်းရုံမက ကိုယ်တိုင်လည်း အရည်အချင်းအပြည့်အဝ ရှိသူတစ်ယောက်ပါ။ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်လုပ်ဖို့ ရွေးချယ်လို က်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ ကို ယ့်ကိုယ် ကိုယ် အကေ ာင်းမွန်ဆုံးတည်ဆောက်ဖို့ တစ်ရက်မှမနားဘဲ အချိန်ရှိသရွေ့ တိုးတက်ရာ တိုးတက်ကြောင်း […]
ဖျားနေတဲ့အိမ်ထောင်စုတွေနဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုရှိတဲ့အိမ်ထောင်စုတွေကို စားသောက် ကုန်တွေလှူဒါန်းပေးလိုက်တဲ့ မင်းသမီး ခိုင်နှင်းဝေ
ပရိသတ်ကြီးတွေရဲ့ အချစ်တော် သရုပ်ဆောင်ခိုင်နှင်းဝေကတော့ ဒီနေ့မှာလည်း ဆန်နဲ့ ဟင်းချက်စရာတွေလှူဒါန်းပေးခဲ့ပါတယ်။ အခုတစ်ခေါက် စားသောက်ကုန်တွေလှူဒါန်းတဲ့ အလှူလေးကိုတော့ ခိုင်နှင်းဝေက ဖျားနာနေတဲ့သူတွေနဲ့ သက်ကြီးရွယ်အို အဖိုးအဖွားတွေရှိတဲ့ ကျူးကျော်အိမ်တွေအတွက်ကို လှူဒါန်းပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ တစ်အိမ်ထောင် ဆန်(၂) ပြည်၊ ဟ င်းချ က်စရာ အနေနဲ့ ငါး(၁)ကောင် ၊ ငါးပိ၊ […]
ေဒါင္းေယာင္ေဆာင္ထားေသာက်ီးကန္းအဖြဲ႕ထဲမွ ျခေသၤ့ျဖစ္လာခဲ့တဲ့ ျပည္သူ႔အခ်စ္ေတာ္ မင္းေမာ္ကြန္း The post ေဒါင္းေယာင္ေဆာင္ထားေသာက်ီးကန္းအဖြဲ႕ထဲမွ ျခေသၤ့ျဖစ္လာခဲ့တဲ့ ျပည္သူ႔အခ်စ္ေတာ္ မင္းေမာ္ကြန္း appeared first on Celebrity Corner. klcelenews
ပရိတ္သတ္ႀကီးေရ…ျပည္သူခ်စ္အႏုပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဗီဗာဟန္းဟvာဆိုရင္ ျမဴးျမဴးႂကြႂကြသီခ်င္းေတြကိုသီဆိုရင္းပရိတ္သတ္ အားေပး ခ်စ္ခင္ရတဲ့ေအာင္ျမင္ေနတဲ့ ဂီတအႏုပညာရွင္တစ္ေvယ ာက္ပဲျ ဖစ္ပါတယ္ေvန ာ္။ဗီဗာဟိန္ vးကေတ ာ့ အႏုပညာရွင္ေ တြျဖစ္ၾကတဲ့ အဆိုေvတာ္ ဗိုလ္ဟိန္းနဲ႔ အဆိုေတာ္ဗိုလ္မဆိုတဲ့ေတးသံရွင္ေတြရဲ႕ မ်ိဳးဆက္သစ္အဆိုေတာ္တစ္ဦးပဲျဖစ္ၿပီး rap အဆိုေတာ္ရွိုင္းလင္းေအာင္ရဲ႕ညီမေလးလည္းျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပားလက္ရွိျဖစ္ေ ပၚေနတဲ့ ကိုဗ စ္ေရာဂါကပ္ဆိုးႀကီးနဲ ႔ပတ္သတ္ၿပီးေအာက္ဆီဂ်င္မလုံေလာက္မႈေၾကာင့္ အသက္ေပါင္း […]
ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော် အဆိုတော် သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးချောလေး နန်းမြတ်ဖြိုးသင်းကတော့ မကြာသေးမီအချိန်ကမှ ခင်ပွန်းဖြစ်သူကို ဆုံးရှုံးထားတာ ပရိသတ်တွေလည်း သိရှိပြီးသားဖြစ်မှာပါနော်။ နန်းမြတ် ရဲ့ ခင်ပွန်းကတော့ ကိုဗစ် ရောဂါကြောင့် အိမ်ထေ ာင်သက် (၄)နှစ်ကျော်မှာတင်ကွယ်လွန်သွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုမှမထင်မှတ်ထားရတဲ့ အချိန်မှာ မိသားစုကို ခွဲခွာကာ ဘဝတစ်ပါးကို ကူးပြောင်းသွားခဲ့တာကြောင့် […]
စားဝတ်နေရေး ခက်ခဲတဲ့ ပြည် သူတွေအတွက် စားသောက် ကုန် တွေလှူဒါန်းမှုမှာ ပါ ဝင် ကုသိုလ် ယူခဲ့ တဲ့ အောင်ရေချမ်း
ပရိသတ်ကြီးရေ ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော် သရုပ်ဆောင်မင်းသားချောအောင်ရေချမ်းကတော့ ဒီနေ့မှာ ကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးတစ်ခုကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ လတ်တလော ကပ်ဘေးတွေကြောင့် လက်လုပ်လက်စားအခြေခံလူတန်းစားတွေအတွက် စားဝတ်နေရေးကတော်တော်လေးကို ကျပ်တည်းနေတဲ့ကာလတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ တတ်နိုင်တဲ့ ပြည်သူတွေနဲ့ ပရဟိတအသင်းတွေက စားဝတ်နေရေးခက်ခဲနေတဲ့ပြည်သူတွေအတွက် စားသောက်ကုန်တွေ လိုက်လံလှူဒါန်းပေးနေခဲ့ကြပါသေးတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ အောင်ရေချမ်းက စားဝတ်နေရေးခက်ခဲနေတဲ့ပြည်သူတွေအတွက် ဆန်၊ဆီ၊ကြက်သွန်၊ကြက်ဥစတဲ့ စားသောက်ကုန်တွေလှူဒါန်းမှုမှာ လုပ်အားဒါနကုသိုလ်အနေနဲ့ သူကိုယ်တိုင်လိုက်လံလှူဒါန်းပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ […]
အစစအရာရာ သတိႀကီးႀကီးထားရမယ့္ အခ်ိန္ကိုေရာက္ၿပီလို႔ ျပည္သူမ်ားအား သတိေပးလာတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ေက်ာ္ေက်ာ္
အစစအရာရာ သတိႀကီးႀကီးထားရမယ့္ အခ်ိန္ကိုေရာက္ၿပီလို႔ ျပည္သူမ်ားအား သတိေပးလာတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ေက်ာ္ေက်ာ္ The post အစစအရာရာ သတိႀကီးႀကီးထားရမယ့္ အခ်ိန္ကိုေရာက္ၿပီလို႔ ျပည္သူမ်ားအား သတိေပးလာတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ေက်ာ္ေက်ာ္ appeared first on Celebrity Corner. klcelenews
လက္ေဝွ႔သမားဘဝကေန အနားယူၿပီးရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္မယ့္ စိတ္ကူးကို ‌ေျပာလာတဲ့ ေအာင္လအန္ဆန္း
လက္ေဝွ႔သမားဘဝကေန အနားယူၿပီးရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္မယ့္ စိတ္ကူးကို ‌ေျပာလာတဲ့ ေအာင္လအန္ဆန္း The post လက္ေဝွ႔သမားဘဝကေန အနားယူၿပီးရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္မယ့္ စိတ္ကူးကို ‌ေျပာလာတဲ့ ေအာင္လအန္ဆန္း appeared first on Celebrity Corner. klcelenews
အဆို တော်နီနီ ခင်ဇော်ကို‌ မွေးနေ့ ဆုတောင်း ပေးလိုက်တဲ့ သရုပ် ဆောင်ညီနန္ဒ
အဆိုတော်နီနီခင်ဇော်ကို‌မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးလိုက်တဲ့သရုပ်ဆောင်ညီနန္ဒ ဒီကနေ့သြဂုတ်လ၃၁ရက်နေ့မှာဆိုရင်တော့ပြည်သူ့အချစ်တော် အဆိုတော်နီနီခင်ဇော်ရဲ့မွေးနေ့ရက်မြတ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပျော်ရွှင်သောမွေးနေ့လေးဖြစ်ပါစေနော်၊အဆိုတော်နီနီခင်ဇော်ရဲ့မွေးနေ့ရက်မြတ်လေးမှာအနုပညာရှင်ညီ အစ်ကိုမောင်နှမများကမွေးနေ့ဆုတောင်းပေးနေကြပါတယ်နော်။ အခုတစ်ခါမှာဆိုရင်လဲသရုပ်ဆောင်ညီနန္ဒကဒီကနေ့မှာကျရောက်လာတဲ့အဆိုတော်နီနီခင်ဇော် ရဲ့မွေးနေ့ကိုအခုလိုပဲဆုတောင်းပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်။ ညီနန္ဒကတော့HappyBirthdayပါညီမလေးနီနီ၊စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာပါစေ၊ကိုယ်တို့မိသားစုကျန်းမာရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့အချိန်တိုင်းစိတ်ရှည်လက်ရှည်လမ်းညွှန်ပေးတဲ့ အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာထက်မှာအခုလိုဆုတောင်းပေးထားပါတယ်၊စာဖတ်ပရိတ်သတ်ကြီးများအတွက်ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ Zawgyi vision ဒီကနေ့သြဂုတ်လ၃၁ရက်နေ့မှာဆိုရင်တော့ပြည်သူ့အချစ်တော် အဆိုတော်နီနီခင်ဇော်ရဲ့မွေးနေ့ရက်မြတ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်၊ပျော်ရွှင်သောမွေးနေ့လေးဖြစ်ပါစေနော်။ ညီနန္ဒကတော့HappyBirthdayပါညီမလေးနီနီ၊စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာပါစေ၊ကိုယ်တို့မိသားစုကျန်းမာရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့ အချိန်တိုင်းစိတ်ရှည်လက်ရှည်လမ်းညွှန်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာထက်မှာအခုလိုဆုတောင်းပေးထားပါတယ်။ klcelenews အဆိုတော်နီနီခင်ဇော်ကို‌မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးလိုက်တဲ့သရုပ်ဆောင်ညီနန္ဒဒီကနေ့သြဂုတ်လ၃၁ရက်နေ့မှာဆိုရင်တော့ပြည်သူ့အချစ်တော်အဆိုတော်နီနီခင်ဇော်ရဲ့မွေးနေ့ရက်မြတ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ပျော်ရွှင်သောမွေးနေ့လေးဖြစ်ပါစေနော်၊အဆိုတော်နီနီခင်ဇော်ရဲ့မွေးနေ့ရက်မြတ်လေးမှာအနုပညာရှင်ညီအစ်ကိုမောင်နှမများကမွေးနေ့ဆုတောင်းပေးနေကြပါတယ်နော်။အခုတစ်ခါမှာဆိုရင်လဲသရုပ်ဆောင်ညီနန္ဒကဒီကနေ့မှာကျရောက်လာတဲ့အဆိုတော်နီနီခင်ဇော်ရဲ့မွေးနေ့ကိုအခုလိုပဲဆုတောင်းပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်။ညီနန္ဒကတော့HappyBirthdayပါညီမလေးနီနီ၊စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာပါစေ၊ကိုယ်တို့မိသားစုကျန်းမာရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့အချိန်တိုင်းစိတ်ရှည်လက်ရှည်လမ်းညွှန်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာထက်မှာအခုလိုဆုတောင်းပေးထားပါတယ်၊စာဖတ်ပရိတ်သတ်ကြီးများအတွက်ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။Zawgyi visionဒီကနေ့သြဂုတ်လ၃၁ရက်နေ့မှာဆိုရင်တော့ပြည်သူ့အချစ်တော်အဆိုတော်နီနီခင်ဇော်ရဲ့မွေးနေ့ရက်မြတ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်၊ပျော်ရွှင်သောမွေးနေ့လေးဖြစ်ပါစေနော်။ညီနန္ဒကတော့HappyBirthdayပါညီမလေးနီနီ၊စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာပါစေ၊ကိုယ်တို့မိသားစုကျန်းမာရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့အချိန်တိုင်းစိတ်ရှည်လက်ရှည်လမ်းညွှန်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာထက်မှာအခုလိုဆုတောင်းပေးထားပါတယ်။ klcelenews klcelenews